စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ပြန်သုံးသပ်ရန် ထိုင်းရောက် ကချင်များ ဆန္ဒပြ | ဧရာဝတီ
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ပြန်သုံးသပ်ရန် ထိုင်းရောက် ကချင်များ ဆန္ဒပြ
ကျော်ခ| January 25, 2013 | Hits:1,856
| | ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ တရုတ်သံရုံးအနီးတွင် ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကျော်ခ / ဧရာဝတီ)
အစိုးရ စစ်တပ်က ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်ဆင်နေမှုသည် တိုင်းရင်းသားများနှင့် တန်းတူနေထိုင်ရေးမူ မဟုတ်ဘဲ အမြစ်ဖြုတ်ရေး အခြေအနေ သက်ရောက်နေသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အမေရိကန် အစိုးရ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ဖြေလျော့ပေးခြင်းများကို သုံးသပ်ပြီး ပိတ်ဆို့မှု ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ကချင်တိုင်းရင်းသားများက ယနေ့ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုလိုက်ကြသည်။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးနှင့် အမေရိကန်သံရုံး ရှေ့တို့တွင် ကချင်တိုင်းရင်းသား ၁၀၀ ကျော်က “ထိုးစစ်တွေရပ်ပါ”၊ “အပြစ်မဲ့ဒေသခံတွေကို သတ်ဖြတ်မှုရပ်တန့်ပါ”၊ “ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပါ” စသည့် စာတန်းများကို ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပြီး အမေရိကန်သံရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့သော ၎င်းတို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ပြန်ထားပေးရန်ပါ ထည့်သွင်း တောင်းဆိုခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ၌ အစိုးရ စစ်တပ်က ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ကို ထိုးစစ်ဆင် ချေမှုန်းနေသည့် တချိန်တည်းတွင် အပြစ်မဲ့ ဒေသခံများကို အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခြင်းများ အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့် အတွက် ယင်းသို့ တောင်းဆိုကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲ စီစဉ်သူ မဆိုင်းဇင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“မြန်မာအစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီးမှ အမေရိကန်က Sanction ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချက်က ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကို ဖြစ်စေတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျမတို့က မလိုလားဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Sanction ကို ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားစေချင်တယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အစစ်ရောက်မှ Sanction ကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ ကျမတို့က တောင်းဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မဆိုင်းဇင်က ပြောသည်။
လိုင်ဇာမြို့ အနီးတဝိုက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများ အပါအဝင် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပို့ဆောင်ပေးရန်နှင့် တရုတ်အစိုးရအား ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(UNHCR) ဖွင့်လှစ်၍ ကချင်ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးခွင့်ရရေး တိုက်တွန်းပေးရန် အမေရိကန် အစိုးရကို တိုက်တွန်းထားသည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန်အနေဖြင့် ကချင်တိုင်းရင်းသားများ အရေးအပေါ် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းမပြုဘဲ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် အလေးထား ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်လာစေရန်နှင့် တပြည်လုံးဆိုင်ရာ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းပေးရေးလည်း တောင်းဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဆန္ဒပြ ကချင်တိုင်းရင်းသားများက တရုတ်သံရုံး ရှေ့သို့လည်း သွားရောက်ပြီး မြန်မာအစိုးရကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ အဖြေရှာပေးရေး တိုက်တွန်းပေးရန်၊ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံလာကြသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို လွတ်လပ်စွာ ခိုလှုံခွင့်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက် ကူညီခွင့်ပြုရန်၊ ကချင်ဒုက္ခသည်များကို ကူညီမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို လမ်းအသုံးပြုခွင့်ပေးရန် တရုတ်အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒပြသူများ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးများမှ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံယူပေး သကဲ့သို့ ဆန္ဒပြ သူများ၏ သဘောထားများနှင့် လုပ်ဆောင်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများကို သံရုံးတာဝန်ရှိသူများကလည်း လက်ခံ နားထောင်ပေးခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား နယ်မြေဖြစ်သော ကချင်ပြည်နယ်ကို အရပ်သားအစိုးရ လက်ထက်တွင် သဲသဲမဲမဲ တိုက်ခိုက်နေခြင်းအပေါ် နားမလည်နိုင် ဖြစ်မိသော်လည်း စစ်ပွဲများကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရသူများကို ကိုယ်ချင်းစာနာမှုဖြင့် ပါဝင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲကို လာရောက်သည့် တိုင်းရင်းသူ မအားဝမ်က ပြောသည်။
“ဒီစစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အထဲမှာ ဒုက္ခသည်တွေက ခံစားနေရတယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ သူတွေက ဒါငါတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ငါတို့လည်း နင်တို့နဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေလိုမျိုး ထပ်တူခံစားရတယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ် ထိုးစစ်ကြောင့် စစ်ဘေးသင့် ကချင်လူထုနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အကြပ်အတည်းများ အမြန်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် စစ်ပွဲများ အေးချမ်းသွားစေရန် ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့က သြစတြေးလျ နိုင်ငံရောက် ကချင်တိုင်းရင်းသားများကလည်း ဆစ်ဒနီမြို့တွင် ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကချင် စစ်ပွဲများငြိမ်းအေးရန် ကချင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုနေချိန်တွင် ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၍ အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက KIA ကို အပြီးသတ် ချေမှုန်းပြီးမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သင့်ကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဆိုင်းဇင်က “တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် မစဉ်းစားပေးတဲ့ ဘယ်လွှတ်တော်မဆို ကျမတို့က ကန့်ကွက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့က တန်းတူရေးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး တန်းတူရေး ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတိုင်း ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို မရဘဲနဲ့ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို အမြစ်ဖြတ် ချေမှုန်းမယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ လွှတ်တော်အမတ် တယောက်ရဲ့ ထွက်ဆိုသင့်တဲ့ စကားမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်က KIA နှင့် အစိုးရတို့အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လထဲတွင် ပျက်ခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဒေသခံ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁ သိန်းကျော်အထိ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးရန် အောက်တိုဘာတွင် မသေချာဖားကန့် လုံခြုံရေး စိတ်မချရသေးတနိုင်ငံလုံး သေနတ်သံတွေ တကယ် တိတ်တော့မလားအစိုးရ စစ်တပ်နှင့် KIA တို့ ထပ်မံ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမြန်မာတွင် နျူကလီးယား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု IAEA ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်နိုင်တော့မည်
စိုင်းစိုင်း January 25, 2013 - 7:39 pm အ ပစ် ရပ် တယ် ဆို တာ တစ် ဖက် ဘဲ ရပ် လို့ မရဘူး။ နှစ်ဦး
နှစ် ဖက် စ လုံး ကို အ ပစ် ရပ် ကြဖို့ တောင်း ဆိုကြ ပါ။တပ် မ
တော် က အ ပစ် ရပ် လဲ ကေ အိုင် အေ အ ပစ် မ ရပ် တော့
စစ် ပွဲ က ဆက် ဖြစ် မှာ ဘဲ။ အ
Reply R.zar January 26, 2013 - 3:13 pm ဗမာလူမျိုး တွေထဲမှာ ဦးစော က မရိုးသားပေမယ့် တိုင်းပြည်ချစ်တတ် တယ်။
သို့သော် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဒေသကို မချစ်ရင်တော့… ခင်ဗျား ကိုယ့်ကိုယ် ကို သာ စဉ်းစား လိုက်ပါတော့…..
Reply စိုင်းစိုင်း January 25, 2013 - 7:55 pm အ ပစ် ရပ် တယ် ဆို တာ တစ် ဖက် ဘဲ ရပ် လို့ မရဘူး။ နှစ်ဦး
စစ် ပွဲ က ဆက် ဖြစ် မှာ ဘဲ။ အ ဓိ က က ကေ အိုင် အေ အ
ပစ် ရပ် ရင် က ချင် ပြည် နယ် ငြိမ်း ချမ်း ပါပြီ ။ဒါ ကြောင့်
ကေ အိုင် အေ ကို အ ပစ် ရပိ ဖို့ ဆန္ဒ ပြ တောင်း ဆို ပေး ကြ ပါ ။
ကျနော် ကချင် ပြည် နယ် သား တစ်း ပါ။
Reply snipher January 25, 2013 - 9:03 pm ကြံဖွတ်အမတ်ဦးလှဆွေအနေဖြင့် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမယ့်ဆိုတဲ့စကားဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်း အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့တပ်တွေအားလုံးကို သွယ်ဝိုက် သတိပေးနေတဲ့စကားမျိုးပါပဲ။ ဒီလောက်ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့တိုင်းပြည်သည် ပြိုကွဲမခံ နိုင်ဘူးဆိုလျှင်တော့ စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို ပေးကိုပေးရမှာပါ။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးဆင်းရဲတွင်းနက်ခဲ့တော့ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အများအပြား ခွဲထွက်ခဲ့ကြသလို နူကလီယားပိုင်ရှင်အင်အားကြီးရုရှလည်း ခွဲထွက်ရေးအတွက် စစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရော ရခဲ့ရဲ့လားဆိုတာ စစ်လိုလားသူများ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဦးလှဆွေ၇ဲ့ အတွေးအခေါ်က ပြည်ထောင်စုသွေးမရှိတဲ့ လမ်းဘေးအမှိုက်တစ်ယောက်ပါပဲ။
Reply swe htwe January 25, 2013 - 10:58 pm We think both sides are to be blamed.
Reply AunG January 26, 2013 - 7:16 am YES, we all Burma Peoples support Peace for Burma and especially for Kachin…
Reply AunG January 26, 2013 - 10:51 pm NO, we have to Blame to Burma Army Generals, Ex-Generals and Leaders. KIO/KIA only stay in their stations in Kachin Land. But, burma army come and attack them. If, burma army retreat from their posts, then Cease Fire will come…,and if burma army total withdraw from Kachin Land, then PEACE will become in Kachin Land…., so lets start now…
Reply Salai Lian January 27, 2013 - 9:43 am Economic sanction plus war crime investigation now needed. Burmese junta was caught while cheating too many times these days. Crooked junta must be put on trial in The Hague for war crime.
Reply Mr Kian January 28, 2013 - 8:57 am you are absolutely RIGHT !
Reply မြန်မာပြည်သား January 27, 2013 - 5:11 pm စီးပွာရေး ပိတ်ဆို့မှု ဆိုတာ မြန်မာပြည်က အစ်ိုးရ စစ်တပ် က တိုင်းရင်းသားတွေကို သတ်ဖြတ် နေတာတွေ အတွက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
စစ် အစိုးရ သက်ဆိုးရှည်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု က ကူညီနေအုံးမှာပါ။
တိုင်းရင်းသားတွေ သွေးစည်းဖို့ သတ္တိရှိဖို့ လိုနေပါပြီ။
အမေရိကန် စီအိုင်အေ က ကူညီခဲ့လို့ အာဏာရလာတဲ့ စစ်တပ် က တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် ဆက်လက် ညှင်းပန်းနေအုံးမှာပါ။
တိုင်းရင်းသား များ အမှန်တရားအတွက် လုံးဝ အလျှော့မပေးကြပါနဲ့။
စစ် တပ် ကို အမေရိကန် ဘယ်လောက်ထောက်ခံထောက်ခံ ဘုရားသခင် က အမှန်တရား ဘက်မှာ ရှိနေမှာပါ။
ကေအိုင်အေ ကို ဘုရားသခင် ချီးမြှင့်မှာပါ။
god blass KIA